Mgbọrọgwụ LG G3 na gam akporo Lollipop | Gam akporosis
Esi mgbọrọgwụ LG G3 na gam akporo Lollipop
Francisco Ruiz | | Gam akporo Root, LG, Nkuzi, Gam akporo nsụgharị
N'isiokwu na-esonụ ma ọ bụ nkuzi bara uru, ọ bụrụ na enwere ike ịkpọ ya nke nyere ezigbo udo ọbụlagodi maka ndị ọrụ nwere ọgụgụ isi ma ọ bụ ndị nwere obere ahụmịhe, anyị ga-egosi gị ụzọ kachasị mma iji nweta Mgbọrọgwụ LG G3 na gam akporo Lollipop.
Mgbọrọgwụ ikike iji mee ma megharịa dị ka anyị masịrị anyị LG G3, ụdị ya niile na ụdị ya, n'ihi edemede nke ndị mmepe onwe ha sitere na ngalaba mmepe gam akporo kachasị mma na-abụghị onye ọzọ ndị ọrụ XDA Developers forum. Yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ Nweta LG G3 mgbọrọgwụ na gam akporo Lollipop, M na-adụ gị ọdụ ka ịpị "Nọgidenụ na-agụ" ebe ọ bụ na anyị ga-akọwa usoro usoro site na nkwụsị.
1 Mgbọrọgwụ iji nweta mgbọrọgwụ LG G3 na Android Lollipop
2 Esi mgbọrọgwụ LG G3 na gam akporo Lollipop
Mgbọrọgwụ iji nweta mgbọrọgwụ LG G3 na Android Lollipop
Ihe ndi choro choro di nfe nwere kọmputa nke onwe gị nke nwere Windows na LG ọkwọ ụgbọala gị arụnyere na ya. Ọ bụrụ na inweela PC Suite, mmemme LG gọọmentị, ị ga-enwerịrị ndị ọkwọ ụgbọala arụnyere n'ụzọ ziri ezi, ọ bụ ezie na ịnweghị n'aka maka ya, ma ọ bụ na ịchọghị itinye usoro nke ị ga-eji, Nwere ike ibudata ndị ọkwọ ụgbọala LG ozugbo na njikọ a ma wụnye ha site na ịpị okpukpu abụọ na faịlụ executable.
Ozugbo awụnyere ndị ọkwọ ụgbọala ahụ, ọ bụrụ na ị na-eme ya na nke mbụ, ọ dị mma ịmalitegharị kọmputa nkeonwe n'ihi na echichi na-mmetụta.
Ihe ozo choro iru bu nwee arụmọrụ USB debugging Site na ntọala ndị nrụpụta / nhọrọ, nhọrọ a bu ụzọ zoo n'ime ntọala gam akporo ma anyị nwere ike ịnweta ya ma kpọghee ya ka ọ pụta na ntọala gam akporo site na isoro usoro m kọwara na vidiyo a:
Ozugbo emere ihe abua ndia, anyi puru ime ya Budata ederede iji gbanye LG G3 na android Lollipop na-eso usoro ndị a dị mfe nkuzi:
Ugbu a, anyị ga-enwe okpukpu abụọ na LG-Root-Script-by-avicohh.exe faịlụ wee họrọ folda ebe anyị chọrọ ịtọpụ faịlụ ndị dị mkpa iji nweta Mgbọrọgwụ LG G3 na gam akporo Lollipop.
Ozugbo faịlụ ndị ahụ na-emeghe n’ime folda ahụ anyị họọrọ, anyị ga-eme ya jikọọ LG G3 na PC na USB debugging nyeere, na anyị ga-okpukpu abụọ pịa faịlụ a na-akpọ LG Root Script.bat.
Ugbu a, anyị ga-agbaso ntuziaka ndị egosiri na ihuenyo MSdos maka ime ihe ederede, nke bụ ihe ọ bụla ọzọ chere usoro ihe omume na-akpaghị aka Mgbọrọgwụ LG G3 na gam akporo Lollipop.
Ọ bụrụ na anyị nwere nsogbu maka edemede iji chọpụta ngwaọrụ anyị, ozugbo amalitegharịrị ya, anyị ga-ejikọrịrị ya na ọnọdụ Download. A na-enweta nke a site na ịmalite site na njedebe na ijikọ ya na PC n'otu oge ahụ ka anyị pịa bọtịnụ olu elu.
Iji usoro ndị a dị mfe Anyị ga-enwerịrị ịnụ ụtọ ikikere mgbọrọgwụ na LG G3 ma obu mara dika Ikike SuperUser inwe ike ịwụnye ma ọ bụ wepu ihe anyị chọrọ, yana inwe ike ịwụnye ngwa pụrụ iche ma ọ bụ sistemụ iji bulie arụmọrụ nke ọnụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » LG » Esi mgbọrọgwụ LG G3 na gam akporo Lollipop
Lg g3 na lollipop nọrọ na logo ahụ. na ọ naghị eme ebe ahụ, gịnị ka m ga-eme?
Zaghachi norma cayetano
Rafael Angel Lopez Montilla dijo
Youhaziela ya iji nye gị azịza ya?
Zaghachi Rafael Angel López Montilla
Zaghachi Juan jose
Onye ozo anwaala
Zaghachi Francisco Javier Sanchez Roca
Ndewo enyi, m gbanyere mkpọrọgwụ G3 m na-agba ọsọ Lollipop, enwere m ụdị 855 na Telcel (Mexico), emelitere site na OTA, ọ rụkwara ọrụ nke ọma 🙂 Enwere m mgbọrọgwụ na lollipop
Zaghachi Keyzo Gakiya
Ndewo, m nwalere mgbọrọgwụ LG G3 m na-agba Lollipop, (kwalite site na OTA) ọ rụkwara nke ọma, daalụ nke ukwuu! Enwetụbeghị m mmasị ịnwe ngwaahịa gam akporo
Biko!!! Ekwesịrị ịkwalite ka ọ bulie elu, bụ imeziwanye… 5.0 bụ garrrrrrraaaaa, ị gaghị ekwenye na ya, etinyela ya !!! Enwere m ezigbo lg g3 nke ọma ahazi wdg, nke a 5.0 bibiri m. Ekwesịrị m ịwụnye ngwa ahụ ọzọ, kpochapụ ha ma tinyegharịa ha, mba mba, ọ bụ cck ... ya bụ. Ntị, emela ya!
Anaghị m arụ ọrụ, D855 na-enye m ọdụ ụgbọ mmiri achọtaghị na mgbe m malitere ya na ọnọdụ nbudata ọ naghị arụ ọrụ.
otu ihe ahụ na-eme m na luis
E nwere ọtụtụ ndị na-adịghị arụ ọrụ a na ụdị mgbọrọgwụ (m asian)
Ọ ga - ekwe omume na ọ na - arụ ọrụ maka Android 5.0.1 ma ọ bụghị maka gam akporo 5.0?
Ọ bụ oge mbụ m na-agbanye ekwentị ma ọ bụ oge mbụ m nwere ama ma achọghị m ịgha ya .__. Kwurịtanụ otú o si gaa… ..
Zaghachi Edward Eskouden
ọ naghị arụ ọrụ maka m na gam akporo 5 lg g3 D955
ezi ndị enyi anaghị eme ka m gbanye mgbọrọgwụ nke usoro ndị ahụ m nwere ike ịme ???
Enwere m LG G3 na 5.0 gbakwunyere mmelite ikpeazụ nke enwere ma agbalịrị m ya oge 100 dịka ọ na-ekwu na nkuzi a na 100 ọzọ yana otu mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ nke bụ otu, na antivirus na-enweghị antivirus na enweghị ụzọ ... Ndi dum usoro na njedebe m ga-esi «Emela!» ma site na ihe m hụrụ enwere akụkụ nke usoro ahụ na-awụlị ya, nke a bụ akụkụ nke ikpe-azụ;
LỌ AKECKỌ PECR:: BANYE, AH LE
-Utu / usoro, / data na rootfs
- isgbanwe OTA ndụ
-Iwepụ faịlụ ochie
-Eme ka faịlụ
-Utuo / sistemụ na / data
Usoro edemede anaghị arụ ọrụ maka m, ọ nọrọ na «ngwaọrụ nyocha», mana na XDA eri ị nwere ike ibudata mmemme a na - etinye GUI nwere nghọta karịa na ọ rụpụtara m. Naanị ihe bụ na ọ nọgidere na 90% na ekwentị «na-emelite ngwa ngwa» maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ minit 30 ma ebe ọ bụ na ọ zaghị m ewepụwo batrị ahụ. Agbanyela m ọzọ na mgbọrọgwụ emeworị, ọ na-arụ ọrụ zuru oke.
Otu ihe ahu mere m,
Zaghachi to maykol peru
A ga-ehichapụ ngwa m niile?
ọ na-achọpụta ngwaọrụ ahụ na ihe niile dị mma ruo mgbe ọ ruru nwelite ngwa ngwa, ebe ọ naghị ebu ma nọrọ na 0%, ọ naghị arụ ọrụ m ma ọ bụrụ na mmadụ gafere nke a ma nwee ike inyere m aka idozi ya, m ga-enwe ekele maka ya. nwee LG G3 855, ekele
kedu ka i siri dozie ya ,,, a bu m otu
chekwaa jimenez dijo
Otu ihe ahụ na - eme m dị ka damian ... agbalịrị m ya otu puku ụzọ dị iche iche yana ọtụtụ narị nkuzi ... ọ nweghịkwa ihe
Zaghachi salva jimenez
Ndewo ụmụ nwoke, emere m usoro ahụ dum, ruo mgbe ọ ruru Firmware Update, ebe ọ na-anọ na 0%. Na na console iwu naanị gosipụtara Pụrụ Iche Iwu: Tinye, hapụ
site n’ebe ahụ ọ naghị eme ma ọ naghị apụta na ọ bụ mgbọrọgwụ. Onye ọ bụla nke nwere azịza biko, m bụ novice na gam akporo a.
Zaghachi Ana Fernandez
Enwerem android 5.0 ma ogaghi ekwe ka m gbanye mgbọrọgwụ
Agbalịrị m ihe dị na post ma ọ naghị arụ ọrụ m
Olee otu m ga-esi gbanye mgbọrọgwụ ya?
Echere m na mgbọrọgwụ na-arụ ọrụ na nsụgharị dị ala karịa 21a. Ejiri m usoro a tupu emelite ruo 21st na mgbọrọgwụ mbụ ugbu a na 21st enweghị ụzọ ọ dị ka ọ na-eme usoro niile nke ọma mana na njedebe nke mgbọrọgwụ enweghị akara. Ichere mmelite edemede.
Gbanwee USB na ọnọdụ PTP.
Otu ihe ahụ na-eme m dị ka Ana
«Ndewo ụmụ nwoke, emere m usoro ahụ niile nke ọma, ruo mgbe ọ ruru Firmware Update, ebe ọ nọrọ na 0%. Na na console iwu naanị gosipụtara Pụrụ Iche Iwu: Tinye, hapụ
site na ya emeghi eme na adighi m enweta na ọ bụ mgbọrọgwụ. Onye ọ bụla nwere ihe ngwọta biko, adị m ọhụrụ gam akporo. »
Kedu ka m ga - esi gboo ya? : C
Google Play Services 7.0 SDK dị maka ndị mmepe nwere API ọhụrụ maka ebe, njikọ chiri anya na ndị ọzọ
[ROM] Otu esi emelite LG G2 ka gam akporo Official Stock Lollipop iji Rom esiri